Ey dilay cunuga madaxweynaha dalka Gambia oo la dilay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeEditorialEy dilay cunuga madaxweynaha dalka Gambia oo la dilay
February 2, 2017 Puntland Mirror Editorial 0
Habibu Barrow ayaa u dhntay qaniinyada eyga, sida ay sheegeen qoysku. [Sawirka: DR ISATOU TOURAY/Facebook]
Ay dilay cunug yar oo sideed sano jir ah oo uu dhalay Madaxweynaha dalka Gambia Adama Barrow ayaa la dilay, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda.
Habibu Barrow ayaa ku dhintay isbitaalka kadib markii uu qaniinay eygu bishii lasoo dhaafay isaga oo ku sugnaa guriga eedadiis oo kuyaala xeeb u dhow caasimada Banjul.
Weerarka ayaa dhacay kahor inta Barrow la caleemo-saarin markaas oo uu ku sugnaa dalka Senegal.
Madaxweynaha oo dhawaan dalka Gambia kusoo noqday, ayaa ka maqnaa aaska wiilkiisa.
Wararka ayaa sheegaya in Habibu walaalkiis uu garaacay eyga uuna dhaawac culus uga geystay madaxa.
Eyga waxaa lahaa madaxweynaha walaashiis waxaana uu waardiye uga ahaa gurigeeda. [Sawirka: BBC]
Ma cadda sababta uu eygu u weeraray wiilka yar ee geeriyooday.
Saraakiisha dowladda ayaa sheegay in eyga oo ay lahayd eedadu uusan cidna weerarin markaas kahor.
Adama Barrow, oo bishii December ee sanadkii 2016-ka la doortay, ayaa joogay dalka deriska ah ee Senegal kadib markii madaxweynihii hore Yahya Jammeh uu diiday in uu xilka ka dego.
Barrow ayaa Gambia kusoo noqday asbuucii lasoo dhaafay kadib markii Jammeh uu go’aansaday in uu dalka ka tago.
January 13, 2017 Doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo xadiday tan madaxweynaha
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibada Soomaaliya oo lagu eedeeyay musuqmaasuq
Muqdisho-(Puntand Mirror) Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibada Soomaaliya Mukhtaar Mahad Daauud ayaa lagu eedeeyay musuqmaasuq, sida uu sheegay Hanti-dhowraha Guud. Maxamed Maxamuud Cali, oo ah Hanti-dhowraha Guud ee qaranka oo warbaahinta la hadlay maanta [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Abwaanka ruugcadaaga ah ee Soomaaliyeed Cabdulqaadir Cabdi Shube ayaa loo magacaabay agaasimaha tiyaatarka qaranka, sida lagu sheegay digreeto ka soo baxday wasiirka warfaafinta, hidaha iyo dhaqanka, iyo dalxiiska ee dowladda federaalka Soomaaliya. Abwaan [...]